အောင်မြင်ခြင်း သီအိုရီများ - အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း(၈) | mmshare
၃၃ - ပထမဆုံးအကြိမ် အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်ကြိမ် − If you can’t get it right the first time, why bother trying?
ဘယ်အရာကို မဆို တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ အားလုံးပြည့်စုံချင်လို့ မရပါဘူး။ လိုချင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အနေအထားတစ်ခုကို ရဖို့ ရောက်ဖို့ အခါခါ ကြိုးစားအားထုတ်ကြရတာ လောက သဘာဝပါ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ တစ်ခါတည်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆမှား တစ်ခု မတော်တဆ ရှိနေခဲ့ရင် အမြန် ဖယ်ထုတ်လိုက် စေချင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ လောကမှာ ဘယ်သူကမှ ဘယ်အရာကိုမှ ပြည့်စုံအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး၊ ကိုယ်တတ်စွမ်းသလောက် ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်ပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အားထုတ်ကြရတာပါ။
၃၄ - အောင်မြင်မှု ဆိုတာ အဆင့်ဆင့် တက်ရတဲ့ လှေခါး − Success is the ladder with unlimited steps
ဘယ်လုပ်ငန်း မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်မှုရဖို့ ဆိုတာ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး။ အဆင့်ဆင့် ကြိုးစား ရတာပါ။ အဆင့်တစ်ခုမှာ ရလာတဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ နောက်အဆင့်တစ်ခုအတွက် လှေခါးထစ်ပါပဲ။
အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ အခါ " အဲဒီလောက်အထိ အောင်မြင်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး " လို့များ အတွေးရှိနေခဲ့ရင် အမြန်ဆုံး ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအတွေးကပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တားဆီးထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရှည်လျား ကြမ်းတမ်းပြီး အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ လမ်းခရီးများစွာကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လာပြီ ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ သင်သွားနေတဲ့ လမ်းခရီးအတွက် အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာ သင့်အတွက် ဘဝကပေးတဲ့ အလေ့အထ (Second Nature) တစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ထိထိရောက်ရောက် မကြိုးစားဘဲ ဘယ်တော့မှ ချက်ချင်း မရနိုင်ပါဘူး။
၃၅ - မင်းအောင်မြင်လာရင် လူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်လည်း ပြောင်းလာမယ် − If you succeed, people's expectations will change.
ကိုယ့်ကို လူတွေ ဘာပြောမလဲ၊ ဘယ်လို ထင်မြင်ယူဆ နေမလဲ ဆိုတာတွေကို သိပ်တွေးမနေပါနဲ့။ အဲဒါ ကိုယ့်အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်အောင်မြင်မှု အတိုင်းအတာကို မူတည်ပြီး လူတွေရဲ့ အမြင်တွေ ပြောင်းလဲနေမှာကတော့ အသေအချာပါ။
သင်ဟာ လူတွေရဲ့ဘဝတွေကို တစ်နည်းတစ်ဖုံနဲ့ ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားရင် သင့်ကြောင့် ဘဝမှာ​ပြောင်းလဲသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ သင့်အပေါ် ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေကလည်း အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ လူတွေရဲ့ ဘဝမျှော်လင့်ချက်တွေကို တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လေလေ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အောင်မြင်လေလေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခု သတိထားဖို့ လိုတာက၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရာအားလုံးကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ပြီးအောင် လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်၊ ကိုယ့်အပေါ်မှာ တခြားသူတွေ ထားရှိတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ ပါပဲ။
အဲဒီအတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ်လုပ်နိင်သမျှ အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး၊ ကိုယ့်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အရာတွေအတွက်လည်း အချိန်ပေး လုပ်ဆောင်သွားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် အချိန်တွေ ကုန်လွန်သွားတာနဲ့ အမျှ ကိုယ့်အတွက်ရော အခြားသူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အတွက်ပါ အောင်မြင်အောင် ဖြည့်ဆည်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၃၆ - အောင်မြင်မှုနှင့် တာဝန်ယူရမှုများ − Successes and Responsibilities
အောင်မြင်မှုတိုင်းနဲ့ အတူ တာဝန်ယူရတဲ့ အရာတွေလည်း အတူပါလာလေ့ ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်တွေ အောင်မြင်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ Customer တွေအပေါ် ထားရှိရတဲ့ တာဝန်ယူစရာ (Responsibility) တွေပိုများလာပါတယ်။ အဲဒါမှလည်း နှစ်ဉီးနှစ်ဖက် ရေရှည် အကျိုးရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ အောင်မြင်လာတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ဖောက်သည်တွေ အဆင်ပြေအောင် တာဝန်ယူရတာထက် အရေးကြီးတာ မရှိတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘဝတွေမှာလည်း တာဝန်ယူစရာတွေကို ကျေပွန်အောင် တာဝန်ယူတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
တာဝန်ယူစရာတွေ များလာတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ပိုကောင်းလာတာပါ။ လူသားတွေရဲ့ ဘဝတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့ တာဝန်ယူစရာတွေ များလာလေလေ ပိုကောင်းလေလေ ပါပဲ။ အဲဒီလို တာဝန်ယူစရာတွေဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးလာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်လာရင် ငြင်းပယ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကိုပဲ လက်ခံနိုင်ဖို့ အရေးကြီးသလို၊ တာဝန်မယူနိုင်တာတွေ အတွက်လည်း ငြင်းရဲတဲ့ သတ္တိရှိဖို့ လိုပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ တာဝန်မယူနိုင်ဘူးထင်ပြီး အလျင်စလို ငြင်းပယ်လိုက်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ခါလောက်တော့ ကြိုးစားကြည့် သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မလုပ်နိုင်တာ သေချာသွားပြီ၊ ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်တာ သေချာပြီ ဆိုရင်၊ တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ ဒီပြဿာနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် တစ်ယောက်ယောက်ကို အစားထိုးနိုင်ဖို့ တာဝန်ယူ ရပါလိမ့်မယ်။
၃၇ - အောင်မြင်မှုဆိုတာ ကြောက်စရာ မဟုတ်
တချို့လူတွေက အောင်မြင်လာတာနဲ့ အမျှ တလွဲတချော်တွေ ဖြစ်ပြီး အကျဘက်ကို ရောက်သွားတာ၊ အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာတွေကို သင်မြင်ဖူးကောင်း မြင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကို ကြည့်ပြီး သင့်အနေနဲ့ ကြောက်နေစရာ မလိုပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သင်ဟာ သူတို့နဲ့ မတူလို့ ပါပဲ။
အဲဒီလို ဖြစ်ရပ်တွေ၊ အဲဒီလူတွေကို သတိထားစရာ သင်ခန်းစာယူစရာ ပုံပြင်တစ်ခု အနေနဲ့ပဲ ကြည့်ပါ။ သင်ခန်းစာ ယူပါ။
ယူတတ်ရင် နေရာတိုင်း ဖြစ်ရပ်တိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ သင်ခန်းစာ ယူစရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လူတွေ အောင်မြင်လာပြီး အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် လမ်းပျောက် ကျဆုံးသွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေဟာ လေ့လာသင်ယူစရာ အကောင်းဆုံး သင်ခန်းစာတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။
အောင်မြင်မှုတွေဟာ ငယ်သည်၊ ကြီးသည် ဖြစ်စေ၊ အောင်မြင်မှုတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ အတားအဆီးတွေနဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အရင်းအနှီးတွေ ရှိနေတာ အသေအခြာပါပဲ။ အဲဒီ အရာတွေကို လေ့လာသင်ယူပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ စနစ်တကျ အသုံးချတတ်တာကလည်း အောင်မြင်မှုအတွက် သို့မဟုတ် အောင်မြင်တဲ့ သူတွေရဲ့ အရည်အချင်းကောင်း တစ်ခုပါပဲ။
Image credit - happyherbivore.com/2013/02/overcoming-the-struggle
‹ အချိန်ကောင်း အခါကောင်း အခြေအနေကောင်း - အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း (၇) up